နှိမ့်ချ powered သည့်အခါ 747-8F Moving?
မေးခွန်း နှိမ့်ချ powered သည့်အခါ 747-8F Moving?
8 လအတွင်း3weeks ago #1313 by TheFinnishDude
နှိမ့်ချ powered စဉ်အချို့ wierd အကြောင်းပြချက်အဘို့, 747 လှုံ့ဆော်ပေး။ တစုံတယောက်သောသူသည်အဘယ်ကြောင့်သိသနည်း
7 လအတွင်း4weeks ago #1348 by Gh0stRider203
7 လအတွင်း4weeks ago -7လအတွင်း4weeks ago #1350 by TheFinnishDude
ဟုတ်ပါတယ်, set ကိုချိုးတော်မူ၏။ ဒါဟာကိုယ့်အင်ဂျင် start သည့်အခါက forward ရွေ့လျားရပ်လိုက်နိုင်သည်။ တစ်ဦးကနည်းနည်း wierd, အဆိုးဆုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း AirHauler ကစား somtimes အခါ, မှန်တဲ့အဆောက်အဦးများ၏ရှေ့မှောက်၌လေယာဉ်ကိုသက်ရောက်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ငါစတင်ရန်အခွင့်အလမ်းရဖို့တောင်မှမတိုင်မီကြောင့်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ပျက်ကျမှုဖြစ်ပေါ်စေသည်ကအနီးရှိအတွက် drifts ... ¯ \_ _ (ツ) _ / ¯
နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်:7လအတွင်း4လွန်ခဲ့တဲ့ရက်သတ္တပတ်များက TheFinnishDude.